Soo dejisan Adobe Photoshop 19.1.3 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaAdobe Photoshop
Bogga rasmiga ah: Adobe Photoshop
Adobe Photoshop – mid ka mid ah barnaamijyada ugu awoodda badan ee sawirrada muuqaalka iyo naqshadda webka. Software wuxuu ka kooban yahay cajalad cajiib ah oo ah qalabka kala duwan, hawlaha iyo filtarrada, labadaba waxqabadka muuqaalka sawir-gacmeedka iyo hawlo kale oo badan. Adobe Photoshop wuxuu bixiyaa qalab ballaaran oo loogu talagalay naqshadeynta webka oo ay ku jiraan sawirrada muuqaalka, sawiridda naqshadeynta, qorsheynta faytoominta, la shaqeynta jaantusyada iwm, iwm. Adobe Photoshop wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la shaqeysid shaashado 3D ah oo suurageliya in la abuuro mashaariic kala duwan kaas oo markaa lagu daabici karo Printer-ka 3D. Software wuxuu taageersan yahay maamulaha horay u soo bixiya taas oo awood u leh in ay dejiso goobaha lagama maarmaanka u ah qalabka kala duwan, taas oo ka takhalusi doonta baahida loo qabo in la badalo goobo badan. Sidoo kale, Adobe Photoshop wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abaabulto goobta shaqada oo bixisa shuruudaha lagama maarmaanka u ah qorsheynta guuleysiga.
Tifaftiraha sawirada awoodda leh
Raafka iyo dib u soo celinta sawiradii hore
Abuuritaanka sawirrada badan ee la gooyey
Doorashooyinka sare ee lagu shaqeynayo midabada
Noocyo fara badan iyo saameyn gaar ah
La shaqee sawirada 3D iyo daabacaadda 3D
Soo dejisan Adobe Photoshop
Adobe Acrobat Reader – barnaamij softiweer ah oo lagu daawado laguna daabaco faylalka loo yaqaan ’PDF files’ kaas oo leh aalado lagu daro fikradaha dokumentiyada lana macaamil kaydinta daruuraha.
Faallo ku saabsan Adobe Photoshop
Adobe Photoshop Xirfadaha la xiriira
Software ayaa si ay u abuuraan baasaboorka sawiro size iyo kuwa tayadoodii in heerarka dal oo kala duwan. Software ayaa awood u si loogu badalo sawirada qaab lagama maarmaanka u ah daabacaadda.
BartVPN – waa aalad lagu hubiyo ilaalin la isku halleyn karo oo isku xirnaanta internetka ah. Software-ka ayaa awood u siinaya inuu doorto server-ka la doonayo ee khasaaraha ugu yar ee xawaaraha internetka.